Cristiano Ronaldo oo ugu dambeyn SUUQA soo dhigay GURIGIISA…..(Imisaa lagu iibinaya?)+SAWIRRO – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo ugu dambeyn SUUQA soo dhigay GURIGIISA…..(Imisaa lagu iibinaya?)+SAWIRRO
(Europe) 19 Dis 2018. Cristiano Ronaldo ayaa ugu dambeyn suuqa soo dhigay Gurigiisa ku yaala Magaalada Manchester United kaa oo uu deganaan jiray berigii uu u ciyaari jiray Man United.
Guriga ka kooban shan qol oo jiif ah, Baraag lagu dabaasho, GYM iyo waliba qol lagu daawado Aflaanta ayuu Ronaldo ku iibsaday 3.85 milyan oo bound sanadii 2006, balse wuxuu iminka suuqa ka joogaa 3.25 oo milyan.
Ronaldo ayaa 2009 markii uu ku biiray Real Madrid isku dayay inuu iibiyo gurigiisa Manchester United balse uma suuro galin oo kiro ayuu galiyay oo dadkii degay waxaa ka mid ahaa daafaca Manchester United Luke Shaw.
Xiddiga reer Portugal oo 9-sano uu joogay Real Madrid kaddib xagaagan caga dhigtay kooxda Juventus.
Haddaba EEG guriga uu Ronaldo SUUQA soo dhigay:
"Ma Filayn waxaan oo dhan, Riyadeydu waxay ahayd oo qura inaan....".- Lionel Messi
Bale iyo Benzema oo Caawa ka maqnaan kara Real Madrid Semi-Final ka Koobka Kooxaha Adduunka......(Yaa Final ka ku sugaya??)